Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambatofinandrahana: Mirongatra mafy indray ny asan-dahalo
Ambatofinandrahana: Mirongatra mafy indray ny asan-dahalo
Somary nangingina ny asan-dahalo tao anatin’ny efa-bolana teo izay. Nihena dia nihena ny fanafihana tao Ambatofinandrahana renivohitra. Nihena koa ny fanafihana nataon’andian-dahalo mihoatra ny 50 lahy mahery toa ny nitranga tamin’ny taona 2016 sy ny tapatapaka ny taona 2017.
Ankehitriny nefa dia nihetsika be indray ny asan-dahalo fa indrindra tamin’ny faritra manodidina ny renivohitra sy ny ambanivohitra rehetra. Hatramin’ny ombin’ny mpandranto avy any Malaimbandy sy Midongy Andrefana no iaharan’ny fanafihana indray. Nihamafy hatrany izany nanomboka hatramin’ny krisimasy 2017 iny ka hatramin’ny volana janoary 2018 izao.
Tamin’ny heriandro faran’ny teo iny dia fanafihan-dahalo telo no nitranga tsy lavitra ny renivohitr’Ambatofinandrahana. Ny iray voalohany dia ny asabotsy faha 13 janoary 2018 izay nanafihan’ny jiolahy ny fiara 4X4 an’ilay mpandraharaha avy any Amboropotsy, ka nahalasana ny vola 6 tapitrisa ariary, ary nahapotika ilay fiara tanteraka.
Ny asabotsy faha 13 nifoha ny alahady faha 14 janoary indray dia novonoin’ny jiolahy tao amin’ny làlan’Andranovorivato mankany Matahimasina ny mpanao dabokandro iray ka maty tamin’izany ny lehibeny antsoina hoe Ndriaroda. Lasan’ny jiolahy ny vola 12 tapitrisa ariary mahery. Tsy fantatra na maty na velona ny namany roalahy, satria tsy hita izay nanjavonany. Vola notakian’ny dahalo tamin’ity patiraon’omby very ity. Nangataka 2 hetsy isan’omby tamin’ireo omby very tamin’ny Krisimasy ny dahalo. Tonga handoa izany vola izany ity tompon’omby izao maty izao. Ny talata alina faha 15 janoary 2018 indray dia nanafika tao amin’ny tanàna antsona hoe Ambohimiarina ny dahalo. Matin’ny tompon’omby tamin’izany ny dahalo iray. Tao am-bala mihitsy ity dahalo ity no voatifitra ka maty niaraka taminy tamin’izany ny omby iray. Rehefa maraina ny andro dia akory ny hagagana fa mpianatra iray avy ao amin’ny Lycée antsoina hoe Solofo, izay zafikelin-dRagaory ao Antsahavory, izay mifanila amin’ity tanàna nangalarana ity ihany.
Ny ombin’ny fianakavian’ny tale jeneralin’ny Bianco indray no lasibatra ny alarobia maraina tokony ho tamin’ny 7 ora maraina. Handeha hanosy ireto omby ireto no lasan’ny dahalo izao. Teny an-dàlana dia nampian’ny dahalo tamin’ny omby tao Sambalahy sy Sakalava. Avy hatrany dia nanenjika ny zandary nefa dia mbola ifampitadiavana hatramin’izao.
Mihetsika mafy ny dahalo any Ambatofinandrahana. Toa izany koa ny any Manandriana ary efa mitady hiakatra ao Ambositra renivohitra koa ity raharaha ity ankehitriny satria ny zoma lasa teo dia notafihan’ny dahalo koa teo Idiana.